बाह्र वर्षमा पनि फर्किएन खोलो ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उद्योग > बाह्र वर्षमा पनि फर्किएन खोलो !
मोरङ । नेपाली समाजमा १२ वर्षपछि खोला फर्कन्छ भनिन्छ तर मङ्गलबारेवासीलाई मङ्गलबारे खानेपानी आयोजनाबाट पानी पिउने धोको १२ वर्षदेखि भए पनि अहिलेसम्म उनीहरुले त्यो अवसर पाएका छैनन् ।
उर्लाबारी–६ मङ्गलबारे रामनगर चोकमा रु ३ करोडभन्दा बढी रकम खर्चिएर निर्माण गरिएको मङ्गलबारे खानेपानी निर्माण गरिएको आयोजनास्थलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दमक वितरण केन्द्रले मिटर उपलब्ध नगराइदिँदा आयोजना सञ्चालन अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । दुई वर्षअघि प्राधिकरण दमक वितरण केन्द्रलाई आयोजनाले मिटर उपलब्ध गराउनका लागि रु ३० हजार दाखिला गरे पनि आयोजना अहिलेसम्म विद्युतीय सेवा उपलब्ध भएको छैन ।
जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय मोरङले पाँच वर्षभित्र आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए पनि ढिलासुस्तीका कारण सम्पन्न गर्न एक दशक बढी लागेको हो । मङ्गलबारे खानेपानी आयोजना समितिका अध्यक्ष मुक्तिनाथ न्यौपानेका अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि प्राधिकरणलाई विद्युतीय मिटर जडानका लागि पटक पटक आग्रह गरे पनि त्यसको सुनवाइ नभएको बताए ।
आयोजना समितिका अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार पानी तान्ने ट्रिलरका लागि विद्युत् ट्रान्समिटर भए पनि विद्युत् सेवा उपलब्ध नभएपछि समस्या भएको हो । खानेपानी आयोजनालाई मिटर उपलब्ध गराउन प्राधिकरण दमक वितरण केन्द्र तयार भए पनि आयोजनास्थलमा प्रयोग गरिने ट्रान्सफर कानुनसम्मत नभएकाले मिटर जडान नभएको प्राधिकरण दमकका प्रमुख सुरेन्द्र साहले बताए ।
आयोजनास्थलमा ‘लो–लस’ ट्रान्सफर्मर प्रयोग गरिनुपर्नेमा अर्कै ट्रान्सफर्मर प्रयोग गरिएकाले मिटर जडान नभएको उनले बताए । २०७१ साल माघबाट नेपाल सरकारले खानेपानी आयोजनामा प्रयोग गरिने ट्रान्सफर्मर ‘लो–लस’ अनिवार्य गरेपछि यस्तो समस्या आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पचास घरधुरीलाई उपभोक्ता कार्ड वितरण गरिएको महिनौँ बितिसके पनि उनीहरुले अहिलेसम्म खानेपानी पाएका छैनन् । तीन किमी क्षेत्रमा पाइप बिछ्याइएको वर्ष दिन बितिसके पनि अभैm उपभोक्ताले पानी पिउन पाएका छैनन् ।
यस्तै खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन नपाउँदै जीर्ण बन्दै गएको छ । आयोजनास्थलमा १ वर्ष लगाएर बनाइएको कार्यालय भवनको संरक्षण हुन नसक्दा जीर्ण बन्दै गएको हो । कार्यालय भवनका ढोका भत्किएका छन् । खानेपानी आयोजना परिसरलाई स्थानीयवासीले फोहर फ्याँक्ने ‘डम्पिङ साइट’ बनाएका छन् । करिब रु ३० लाख खर्चिएर बनाइएको खानेपानी आयोजनाको कार्यालय परिसर सहितको चौकीदार भवन पनि संरक्षणका अभावमा लथालिङ्ग छ । कार्यालय परिसरभित्र जथाभाबी फोहोर तथा घारी भएको छ ।
३० जेठ २०७३, १२।००
२०७३ जेष्ठ ३० गते १३:१८ मा प्रकाशित
दृष्टिविहिन बालबालिकालाई थानकोट लायन्सको सहयोग
नागरिक लगानी कोषले गर्यो लाभांश घोषणा : बोनस र नगद कति ?
चप्पल कारखानाको मेसिन अपरेटरदेखि जिफन्टको महासचिवसम्म
मेगा बैंकद्वारा मुसहर र नेटुवा बस्तीका दुई सय बालबालिकालाई न्यानो कपडा वितरण
दिब्यश्वरी हाइड्रोको सेयर आजबाट खुल्ला, हेर्नुहोस्, कहाँ बुझाउने फारम ?
दुई कम्पनीको एफपिओ र आइपिओमा नपरेको पैसा आजबाट फिर्ता हुँदै